Somaliland: Madaxweyne Siilaanyo Oo Xaalad Caafimaad Daro La Soo Daristay Oo Si Dhakhso Ah Logu Qaadi Doono Dalka Imaaradka Carabta - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Madaxweyne Siilaanyo Oo Xaalad Caafimaad Daro La Soo Daristay Oo Si...
Madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa muddo bil iyo ayaamo ah ka dib la filayaa inuu toddobaadkan dib ugu laabto dalka Imaaraadka Carabta. Sidaas waxa Geeska Afrika u xaqiijiyay warar xogogaala oo uu helay.
Wararkan uu Geeska Afrika helay waxay sheegayaan in Madaxweyne Siilaanyo uu dalkaas u tagayo balan dhinaca caafimaadka ah oo uu la leeyahay dhakhaatiir uu safarkiisii hore soo arkay, kuwaas oo wakhtigaas u qabtay inuu muddo ka dib; dib ugu soo laabto.
Madaxweyne Siilaanyo ayaa safarkiisaas hore wuxuu qaatay muddo ku siman 28 maalmood waxaanu Hargeysa yimid badhtamihii bishii hore ee Julay. Lama oga mudada uu Madaxweyne Siilaanyo ku maqnaan doono dalkaas, waxaana la filayaa inay socdaalkiisa ka mid noqdaan qoyskiisa iyo xubno golihiisa ka tirsani.